Fiverenana an-tsokosoko ataon'ny governemanta amerikana any CISPA | Martech Zone
Fiverenana an-tsokosoko ataon'ny governemanta amerikana any CISPA
Asabotsy, Aprily 14, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Theyrrrr baaaack… raha misy zavatra iray tsy ahombiazan'ny governemanta iray dia manimba tsikelikely ny fahalalahan'ny olony izany. Ny lalàna momba ny fizarana sy ny fiarovana ny cyber intelligence (CISPA) dia ny manaraka LASOPY. Mampalahelo fa ity volavolan-dalàna ity dia tsy misy fanoherana iraisan'ny rehetra, na izany aza.
Ny antony mahatonga ny orinasa sasany toa ny Facebook mahita ity volavolan-dalàna ity amin'ny fanoherana kely kokoa dia satria misy zavatra ao anatiny ho azy ireo. Araka ny Electronic Frontier Foundation:
Ireo cybersecurity ny faktiora dia hanome ny orinasa pass maimaimpoana hanaraha-maso sy hanangonana fifandraisana, ao anatin'izany ny angon-drakitra manokana toa ny hafatra an-tsoratra sy ny mailakao. Afaka mandefa izany angon-drakitra izany amin'ny orinasa na amin'ny olon-kafa ny orinasa raha toa ka mihambo izy ireo fa noho ny “tanjona amin'ny fiarovana amin'ny cyber”.
Raha ny fahitako azy dia izay no mahatonga ity volavolan-dalàna ity hivadika hihoatra noho ny SOPA. Rehefa nivoaka ampahibemaso ny SOPA dia nankahala ny rehetra izany ary nitambatra tamin'ny mpanjifa ny orinasa hanakanana izany. Ny fandrahonana vokatr'izany dia ny hampiatoana ny Aterineto ka nahatonga ny governemanta nihemotra. Tamin'ity indray mitoraka ity, ireo lobbyista dia nanabe ny tenany sy nanoratra indray ny verbiage mba hitaona ireo orinasa sy hizara ny fanoherana. Hanana fotoana sarotra kokoa ny mpanjifa hanandrana hanajanona ity volavolan-dalàna ity… na ny manaraka… na ny manaraka. Ny hery izay misy dia tsy hijanona.
Torolàlana momba ny marketing amin'ny Pinterest maimaim-poana avy amin'ny Brainhost
Hevitra momba ny famolavolana doka